ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Reiss Nelson Childhood Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leBhola leGenius eyaziwayo ngegama elithi "Reiss". Ibali lethu leNqaku leNqaku loBantwana likaReiss Nelson Ubuntwaneni kunye ne-Untold Biography yeendaba ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye noRise kaReiss uNelson. Ikhredithi kwizikhululo zeSkyS kunye Arsenal FC
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala kunye nemvelaphi yosapho, imfundo kunye nokwakha ikhondo lomsebenzi, ubomi bokuqala bomsebenzi, ibali lobomi ngaphambi kodumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubudlelwane, ubomi bomntu, iinyani zosapho kunye nendlela yokuphila.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungomnye wolutsha olunomdla ukuba uphume kwi-Arsenal academy. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology kaReiss Nelson enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguReiss Luke Nelson. U-Reiss Nelson wazalwa ngomhla we-10th ka-Disemba 1999 kubazali bakhe-utata waseZimbabwe kunye nomama ongumNgesi kwingingqi ye-Central London yeNdlovu kunye neNqaba, eNgilani.
UReiss Nelson akakhuliswa kwimvelaphi yosapho olunobutyebi. Kwakhona, yena Wayengaloluhlobo lomntwana onabazali bakhe ababenakho ukumnika ingqokelela yeethoyi entsha ngaphandle kwebhola.
UReiss Nelson wakhula ecaleni kwabazali bakhe kunye nomntakwabo omdala e-Aylesbury Estate. Indawo ebonakalayo eboniswe ngezantsi ngumhlaba okude (okwahluke ngokupheleleyo) kwizithili ezixhasayo zezemali eLondon.
Le yindawo ye-Aylesbury Estate apho wakhula khona uReiss Nelson. Ityala kwiSkySports
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ukwenzela ukukhangela imingcipheko yeqela lemigulukudu kunye nolwaphulo-mthetho lwommese, abazali baseReiss bagqiba kwelokuba bathumele unyana wabo kwisikolo saseLondon Nautical ngaseWaterloo. Kwangoko, akuzange kuthandabuzwe ukuba uNelson wayehamba ngendlela elungileyo. Wayengumfana okrelekrele owayenokwenza imisebenzi emininzi kunye nabahlohli bobabini kunye nokudlala ibhola emva kweeyure zesikolo.
Ukuya kuthi ga emva kwemicimbi yesikolo echaphazelekayo, uReiss wayengafezekanga ngaphandle kokuba nomhlobo wakhe osenyongweni adlale naye ibhola. Owona mhlobo usenyongweni wayengengomnye umntu ngaphandle kwakhe UJadon Sancho- Oh ewe, uvile oko !. Sancho abazali bakhe babehlala kwiZakhiwo zeGuinness Trust kufutshane neKennington Park uye waba ngumhlobo osenyongweni ukususela kwiintsuku zabo zobuntwana.
Ubusazi?… Kwakukho kule nkundla yebhola lekhonkrithi ukuba uReiss Nelson kunye nomhlobo wakhe osondeleyo Sancho Bancome izakhono zabo njengabafana. Olu phuculo lubabone bemenyelwa kukhuphiswano lwabantwana baseLondon Southwark.
Bobabini uReiss Nelson noJadon Sancho babengabahlobo abaBalaseleyo bobuNtwana. Ityala kwiSkySports
NgokweSkySports. Ngengokuhlwa yasekwindla kuMzantsi London, omabini amakhwenkwe (Sancho kunye noReiss Nelson) badlala ukhuphiswano ukumangaliswa kwabalandeli. UHolmes-Lewis, umqeqeshi webhola kunye nomcebisi wakhe wavuma kwinto ayibonileyo;
"Ndithe xa ndifika kwindawo ethe tyaba, ndabona lo mntwana ekhwela i-30-eyadi emva koko ephumela kumhlaba ongomnye umfana (uJadon Sancho) owayesuka wazivumbulula waqonda kuye. Ukuphendula, ndakhawuleza ndibamba abaqeqeshi bam bobabini, uCedric [Kobongo] no-Ahmet [Akdaj], ndathi, 'Uyibonile le nto yokuqonda telepathic? Oko kwakuphambene !!"
Bobabini uReiss Nelson noJadon Sancho bagqibela ngokuncedisa iqela labo ukuphumelela ukhuphiswano, olwalumonwabisa uHolmes-Lewis.
UReiss noSancho kukhuphiswano lwabantwana lwaseLondon Southwark. Ityala kwiSkySports
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ubomi bokuqala
Ukuphumelela kwibhola ekhatywayo yasekhaya kwazuza uReiss Nelson umnxeba eMonshot, isifundi solutsha lwengingqi kwindawo yakhe. Xa wayelapho, wafikelwa yiTottenham. UReiss wayeseTottenham inyanga ngaphambi kokuba kufike umnxeba ongenakuphikiswa ovela eArsenal. Umhlobo wakhe osenyongweni uSancho wafumana umnxeba ovela kwaWatford.
Umnqweno bobabini Reiss kwaye Sancho ngebhola ebabone ngonyaka we-2007, ukugqithisa izilingo kunye nokungeniswa kwisetingi ye-Arsenal kunye neWatford ngokwahlukeneyo. Ukuqala ubomi bakhe kwindawo yokufundela kwakungekho lula kuReiss. Emva koko, wayevuka ekuseni aze kulanda uloliwe oya eCatford ecaleni komkhuluwa wakhe. Uyenzile loo nto kathathu ngeveki.
Akukho bude bendawo okanye ukuphela kwexesha kunokubuphelisa ubuhlobo phakathi kukaReiss noSancho. Kuthathe nje imizuzu ye-38 ngololiwe kunye nemizuzu ye-52 ngemoto yamakhwenkwe omabini ukuba abonane. Kwiminyaka ye-14, malunga noMatshi 2015, UJadon Sancho bafudukele eManchester City. UReiss Nelson uqhubekile esenza inkqubela kunye neArsenal njengaye Zishukumise ngokukhawuleza iindlela.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Indlela eya kwiNdaba ibali
Emva kokuba ebaleke kwizikhundla zemfundo, uReiss wanikwa ikhontrakthi yakhe yokuqala yobuchule Arsene Wenger Ngomhla wakhe wokuzalwa we-17th. Kwibhaso yokufumana ixesha lokudlala, uReiss wenza isigqibo esibucayi malunga nomsebenzi. UJadon Sancho oshiye ngaphambili iBorussia Dortmund eJamani ucebise umhlobo wakhe osenyongweni uReiss ukuba amjoyine kwiBundesliga yaseJamani.
UReiss Nelson wagqiba kwelokuba alandele iinyawo zakhe zabahlobo bakhe abahamba phambili ngokuya kwimali mboleko yokudlala nge-1899 Hoffenheim, iklabhu yaseJamani kwisahlulo sokuqala saseJamani. NjengoBorussia Dortmund ye UJadon Sancho, UHoffenheim wanika uReiss Nelson iqonga lokubonisa italente yakhe.
UReiss Nelson wayekhe wabhiyozelwa njengowokuqala ukufaka amanqaku eNgilane kwiYurophu ngeenjongo ze-6 kwimidlalo ye-7, wafumana yonke imizuzu ye-54 kumndilili. Njengoko kuqatshelwe ngezantsi, hayi Raheem Sterling kananjalo UHarry Kane ndingayibetha loo nto.
I-Rees uNelson Road eya kwiNdaba yeFame. Ityala kwi umgangatho
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ukunyuka Kwidumo Ibali
Impembelelo zikaNelson eHoffenheim zamenza wanyuselwa kwi-U21 yaseNgilani. Ikwakhuthaza Unai Emery ukubeka inkumbulo yangaphambi komncinci. Ezo mpawu wayenazo- ukuzithemba, inqanaba lomsebenzi kunye nokuzimisela -Ayebonakala e-Hoffenheim ngoku amkhonze kakuhle kunye neArsenal.
I-Rees uNelson Rise ukuya kwiBali elidumileyo. Ityala kwiSkySports
UReiss Nelson owaba ngumdlali we-844th ukumela iqela lokuqala leArsenal ngaphandle kwamathandabuzo iqinisekisiwe kubalandeli uyisithembiso esihle esilandelayo seklabhu yesiNgesi. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo, kunokwenzeka ukuba abanye abalandeli beArsenal kumele ukuba bacamngca ngemeko yakhe yobudlelwane lo ukubuza umbuzo; 'Ngubani intombi kaReiss Nelson kaNontombazana?'. Ewe!, Akukho nto iphikayo ukuba ukubukeka kwakhe okuhle kudibene nendlela yakhe yokudlala akunakumenza abe nomtsalane kubalandeli bokholo.
Ngubani intombi kaReiss Nelson. Ikhredithi kwi-IG
Ngexesha lokubhalwa, Reiss Nelson engatshatanga kwaye ebonakala egxile emsebenzini wakhe. Ukwahlulela kwindlela yakhe yangoku yesandi, kubonakala ngathi nguReiss ngu ilungele ukuxubana. Mnakunokwenzeka ukuba abe nentombi kodwa ayale ukwenza ubudlelwane kunye naye esidlangalaleni, ubuncinci okwangoku.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ubomi bomntu
Ukwazi ngobomi bukaReiss Nelson kuya kukunceda ufumane umfanekiso wakhe. Ukuqala, ungumntu opholileyo othanda ukubonisa ukuthobeka phakathi kodumo lwebhola yanamhlanje.
Ukwazi uBomi boBuntu bukaReiss Nelson. Ikhredithi kwi-IG
UReiss uNelson ngumntu okwazi ukuguqula iingcinga zakhe zibe zizenzo zekhonkrithi kwaye uza kwenza nantoni na enokwenziwa ngumntu ukufezekisa iinjongo zakhe.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Ubomi Bentsapho
UReiss Nelson, nangona ezelwe eNgilane usazithanda kakhulu iingcambu zakhe zaseZimbabwe. Ukusuka koku kubonakala, utata wakhe, umama kunye nomntakwabo omdala Bonke benze izigqibo ezizizo zokungafuni ukwamkelwa esidlangalaleni.
UTata ka-Nelson Reveni: Kuncinci okwaziwayo ngotata waseZimbabwe, nokuba igama lakhe alikho. Nangona kunjalo, ngokutsho kwewebhusayithi yeArsenal, uReiss unika kanye utata wakhe iizitifiketi zokumgcina usemhlabeni.
Umama ka-Reiss Nelson: Ukucamngca ngeentsuku zakhe zobuntwana, enye yeenkumbulo ezintle zikaReiss yile nto ichaphazela umama wakhe. Lixesha awayeza kusebenza nzima ngalo ukumthenga Unyango lukaHenry Ijee awayeyinxiba mihla le xa esiya esikolweni, emathekweni kunye nokudlala kwisandi. Apha ngezantsi kukho ifoto yomama kunye nonyana bobabini abanayo i-patisonate hug.
UReiss uNelson ubulisa umama wakhe. Ikhredithi kwi-IG
Iinzala zikaReiss zikaNelson: Ngoku ka Iwebhusayithi yeArsenal, Umzukulwana kaReiss Nelson umdala unikwe imbeko ngokuyeka impilo yakhe ukuze ancede umntakwabo omncinci ukufezekisa iphupha lakhe. Umkhuluwa wakhe osele engaziwa (igama-elingaziwayo) wancama kakhulu ukuze afumane uReiss apho akhoyo namhlanje.
Nanini na xa uReiss esiya kumatheko ngolwesihlanu ngolwesiHlanu, umntakwabo omdala wayeqinisekisa ukuba uphumla ngokwaneleyo ngaphambi kokuqala kwempelaveki. Umninawa wakhe omdala uya naye ukuya nokubuya kuloliwe weentetho zesifundo, ukuya nokubuya kwangoko.
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- LifeStyle
UReiss uNelson yindoda enomdla neyonwabisayo eyonwabelayo ukwenza, ukuchitha iimali zayo kunye nokuphila ubomi bayo ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha ukhetha ukukhwela i-jet-isibhakabhaka kumaza olwandle kunokuba nemoto yakhe ezindleleni. Oku kushwankathela indlela yakhe eyahlukileyo yokuphila.
Iinyani zoBomi bukaNelson. Ikhredithi kwi-IG
Iinyani zeNqaku loBuntwana bakaNelson Reissern kunye neNqaku leMbali yoBuntwana eNcinci- Inyaniso engekho
Abahlobo Bakhe abalungileyo: Asides UJadon Sancho, UReiss unabahlobo bakhe ababini ababalaseleyo uEdie noJoe. Onke amakhwenkwe ahambahamba ngokwamanqanaba eArsenal academy ayaphumelela kwimisebenzi yawo.
Ukwazi abahlobo bakaReiss Nelson abaLungileyo. Eddie (Ekhohlo) noJoe (Ekunene).
Inkolo: Igama eliphakathi likaReiss likaNelsonLuke”Ucacisa ukuba ungumkristu ngokwenkolo kwaye mhlawumbi uthambekele kwinkolo yobu-Katolika. 'Luke'wayengumbhali weZenzo zabaPostile kwaye igama leVangeli yesithathu kwiTestamente eNtsha.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda i-Reiss Nelson yethu yaBantwana yezeMbali kunye neNqaku le-Biology le-Untold. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Iindaba zeHamza Choudhury yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UWayne Rooney Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UPeter Crouch Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts